Joyina Ubambiswano Lethu Lwezindaba Zomhlaba Wonke |
Ingabe uyinhlangano yokukhangisa, i-franchise noma ibhizinisi lokubonisana osebenzisana namabhizinisi we-franchise? Uma kunjalo ungabhalisa ngezansi ukuze ube uzakwethu ogunyaziwe wemithombo yezindaba yeFranchiseek.
Njengomlingani wemidiya we-Franchiseek ogunyaziwe uzothola isigqebhezana sakho esiyingqayizivele sesaphulelo ukuze ungene kumakhasimende akho. Amakhasimende akho azothola isaphulelo sokukhetha kuwo wonke amaphakheji wokukhangisa we-PLUS uzothola nekhomishini ngokuchitha imali yawo!
Amakhasimende akho agcina imali futhi udala ukusakaza kwemali okuqhubekayo ukuze wonke umuntu azuze. Ukufaka isicelo sokuba ngumlingani wemidiya we-Franchiseek ogunyaziwe sicela ugcwalise lefomu elingezansi